Kuratidza zvinyorwa neelebheri Czech Paradise
Giant Makomo, Jizera Makomo, Bohemian Paradise
Vanodiwa vashanyi vePetrPikora.com server, mapeji akatsaurirwa kune Giant Mountain, makomo eJizera uye Bohemian Paradise ikozvino inogona kuwanikwa pane itsva Czech nzvimbo PetrPikora.cz, ndatenda. Kwenguva isina kuganhurika, zvinyorwa zvekare zvichave zviripo pane ese ari maviri nzvimbo panguva imwe chete.
Křížkovského vyhlídka (zvakare iyo Vyhlídka kwaya Křížkovský, iyo yekutanga Sofa rekutanga) inowanikwa kubva kuPachovské skaly uye ndiyo yekutanga kuona kweiyo tsvuku chiratidzo chevashanyi kubva kuPerachov, uko kunopinda matombo. Yakatumidzwa zita mushure mekushanya kuPrague Křížkovský Choir musi waKurume 16, 1930. Kubva pakuona kune nzvimbo yenzvimbo kumabvazuva (Kumburk neBradlec), kuchamhembe (Tábor, Morcinov, Kozlov, Kozákov neJinolické madziva) uye kumadokero (kuchamhembe kwakadziva kumadokero) kwePrachovské skaly ( Matongo, Ještěd, Vyskeř, Hruboskalsko uye kumashure kweGiant Mountain.
Kutarisa kwacho kunonziwo Kutaridzika kweKřížkovský Choir, mukurangarira rwendo rwenhengo dzaro kuPrachovské skal musi waKurume 16.3.1930, XNUMX.
Tarisiro yeRunyararo signpost
Vyhlídka Míru iri munzvimbo yepakati pePrachov dombo dhorobha nematombo ari Císařská chodba uye inotipa isu tarisiro yakanakisa yenzvimbo yakakura yedombo guta Prachovské skal uye kumahara kumadokero. Kubva pane maonero ekuona izvo zvinoita kuona nhamba yakakura yematombo edombo uye kazhinji maonero evanokwira vachikunda imwe yadzo. Kupesana mhiri kwemupata zvinoita kuti uone Pechova uye hovalikov maonero. Pamusoro tingaone silhouette yeiyo chiratidzo cheBohemian Paradise castle Trosky kana peak yeVysker. Dunhu rakakura uye diki rekuona kutitungamira rinotitungamira kwariri.
Kubva pane Runyararo Viewpoint pane yakanaka yekuona yedombo rakatenderedza, Prachovská Sindano, Madonna naPlecháč. Zvowonekwa zvakare ndiTrosky, Vyskeř uye Mužský.
Hlaholská vyhlídka - nzvimbo yepamusoro yekutarisa kwePrachovské skal. Iyo ndiyo yechipiri maonero kubva pamusuwo weBranka matombo. Iri zita rinobva mukushanya kuPrague Hlahol Choir, iyo nhengo dzayo yakashanyira dombo muna 1887. Kubva kuHlaholská vyhlídka pane maonero evaridzi veKrikavčí skal group, Přivýšina, Jinonické madziva uye mazhinji emakomo eTábor, Bradlec uye Kumburk. Iko maonero anowanikwa nechiratidzo kubva kune yakasvibira yevashanyi chiratidzo.
Maonero akanyanya ePrachovské Rocks (460 m). Yakatumidzwa zita mushure meiyo Hlahol kwaya muPrague, iyo yakashanyira Pachovské skály muna 1887. Iyo maonero inopa kumabvazuva uye kuchamhembe kwakadzivaona.
Hruboskalsko inzvimbo yakachengetwa inozivikanwa ne22. April 1998. I219,2 ha imwe yemaguta makuru ematombo muBohemian Paradhiso Protected Landscape Area. Chikonzero chekudzivirirwa iguta rakazara dombo rine zvinyorwa zvakachengetedzwa. Hruboskalské guta dombo zvinosanganisira mazana dombo massifs uye vakaparadzana neshongwe, izvo titaure dzakakwirira kusvikira 60 m. Nokuda yakaderera nemishonga sandstone uye kunopfuurira migumisiro dzinoverengeka mabwe akapfuma akasiyana-siyana zvitarisiko uye nezvimiro (mizinga, mahwindo, namasuwo). Hruboskalsko chikamu cheBohemian Paradise Geopark, iyo yakabatanidzwa mumusangano weEurope geoparks munaOctober 2005.
Ndiyo imwe yepakutanga nzvimbo dzekukwira kweCzech, shongwe dzakakurumbira zvikuru Kapelník, Skull, Maják uye Osudová. Pakati peCzech kukwira kwesangano uye Bohemian Paradhiso Yakachengetedzwa Nzvimbo, chibvumirano chinoguma, chinosanganisira mamiriro ekukwira pane sandstone.
Hruboskalské dombo guta zvakare rakakosha nzvimbo revashanyi. Anonyanya kuzivikanwa masaraki anosanganisira chateau Hrubá skála, iyo yakavakirwa padombo Massif muzana yechigumi nemana ...
Czech Paradise (German Böhmisches Paradies) ndiro zita nokuti nzvimbo pakati Pojizeří iyo ine mukuru wevasungwa rwokuzvarwa uye nhoroondo sezvivako. Zita rokuti Bohemian Paradhiso pakutanga raireva kunzvimbo yeLituoměřice (nhasi inonzi Garden of Bohemia), inogara nevanhu vanogara muchiGermany. Tsanangudzo yezvino yakasikwa mu2. hafu ye19. zana remakore. Zvisinei, sezvo hachishandi zvinowanzotaurwa nezvazvo sezvo Spa vaeni aishanyira Spa Sedmihorky, wokutanga rakanyorwawo kushandiswa, unobva mupepeti Vaclav Durych pamusoro 1886.
Nzvimbo iriko inosvika makiromita makumi mapfumbamwe kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwePrague inenge yakatarisana nemaguta: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice uye Jičín. Turnov anogamuchirwa se "mwoyo weBohemian Paradise". Iwo makuru mashura enzvimbo iyi gomo reKozákov nematongo eimba yeTrosky. Matombo emadombo akakoshawo, kunyanya Prachovské skály, Příhrazské skály, Hruboskalsko uye madziva, semuenzaniso Žabakor, Komárovský rybník uye madziva mune Podtrosecké uye Podkostecké mipata…
Prachov Rocks photo
Iyo Plakánek Valley Nature Reserve yakaziviswa muna1990 uye iri pamuganho wematunhu eMladá Boleslav ne Jičín pakati pemisha yePodkost, Vesec u Sobotky, Střehom neDobšín. Nyaya yekudzivirirwa ndeye mupata une mabwe ejecha akapinza uye shongwe, nzvimbo dzakadziya mvura uye zvidimbu zvemafashama munharaunda, masango scree, relict dombo pine uye acidophilic uye pine oak masango. Nzvimbo dzazvino dzekugara dzakatsiviwa kare nakare nesango rekutanga dondo real-alder. Iyo nzvimbo yakachengetedzwa iri mukutarisira kweAOPK ČR - hofisi yedunhu muLiberec.
Iri zita rekuti Plakánek rakatanga kuzana ramakore rechigumi nemana zvichienderana nemhuri yePlakanek, avo vakapisa marasha munzvimbo ino uye vaine "misodzi" yekuchema. Muna 17, iyo yekuchengetedza yaive ichidonhedza matanda kumatunhu mukutyora maitiro akarairwa zvichienderana nehurongwa hwekutarisira, hwakakuvadza nzvimbo yakachengetedzwa.
Mupata mukuru, unonziwo Střehomský Plakánek, wakacherwa neRwizi rweKlenice, rwunopiwawo mvura nezvitubu zvakawanda zvinokwira kubva pamatombo nezvikomo. Maodzanyemba emupata pane…